Machu Picchu - Tanànan'ny Peroa
Machu Picchu, Pero - Tanànan-tanàna tsy hita popoka ao amin'ny Incas
Afaka mitsidika an'i Machu Picchu avy any Lima, Però ny mpandeha an-diabe
Machu Picchu no tranonkala arkeolojika malaza indrindra any Amerika Atsimo. Ity Peroviana mahagaga "Tanànan'ny Tombon'izao Tontolo Izao" izao dia nahaliana ny tantara tamin'ny taonjato efa ho zato. Ankoatra ny toerana mahatalanjona ao Andes, mahaliana ny mpikaroka sy ny mpahay tantara ny Machu Picchu satria tsy voarakitra an-tsoratra ao amin'ny tantaran'ny tantara fahiny momba ny mpanjanaka Espaniola. Nandresy ny renivohitra Incan renivohitra Cuzco ny fitsangatsanganana Espaniola ary namindra ny toeran'ny fahefana ho any amoron-tsiraka Lima.
Ao amin'ny rakitsorany, ireo mpanjanaka dia manonona tanàna maro hafa any Incan, fa tsy Machu Picchu . Noho izany, tsy misy olona mahafantatra ny asan'ny tanàna.
Background and History of Machu Picchu
Machu Picchu dia fantatry ny tantsaha Peroviana vitsivitsy monja taorian'ilay 1911, raha toa ny mpahay tantara Amerikana iray antsoina hoe Hiram Bingham izay saika tafintohina ka nitady ilay tanàna very tany Vilcabamba. Bingham nahita tranobe navesatra tamin'ny zavamaniry. Nieritreritra izy tamin'ny voalohany fa nahita an'i Vilcabamba, ary niverina imbetsaka izy mba hihady tao amin'ilay toerana ary nanandrana sy namaha ny mistery. Taty aoriana dia hita fa lavidavitra kokoa any amin'ny ala mikitroka i Vilcabamba. Nandritra ny taona 1930 sy 1940, ireo mpikaroka avy any Però sy Etazonia dia nanohy nanala ny ala tao amin'ireo trano rava, ary nanapa-kevitra ny hamaha ny misterin'i Machu Picchu. 100 taona mahery taty aoriana dia mbola tsy mahafantatra momba ny tanàna foana izahay. Ny fanombantombanana ankehitriny dia hoe efa niala ny Macho Picchu ny Incas talohan'ny nahatongavan'ny Espaniola tao Però.
Izany dia manazava ny antony tsy nahalalan'ny tantara an-tsehatra Espaniola. Zavatra iray no azo antoka. Machu Picchu dia manana tranokala maromaro maromaro izay ahitana asa vato avo be izay tsy maintsy ho ivon-toeran'ny seranan-tsarimihetsika iray tamin'ny fotoana iray tao amin'ny tantaran'i Incan. Mahaliana fa tamin'ny 1986 ny arkeology no nahita tanàna lehibe kokoa noho i Machu Picchu, dimy kilometatra avaratry ny tanàna.
Nantsoin'izy ireo hoe "Maranpampa" (na Mandorpampa) ity "vaovao" ity. Mety hanampy an'i Maranpampa hamaha ny misterin'i Machu Picchu. Amin'izao fotoana izao, ny mpitsidika dia tokony hanatsoaka ny heviny manokana.
Ahoana no ahatongavana any Machu Picchu
Ny fahatongavan'i Machu Picchu dia mety ho ny antsasaky ny "fahafinaretana". Ny ankamaroan'ny olona dia mandeha any Machu Picchu amin'ny alàlan'ny làlana malaza indrindra - manidina mankany Cuzco, mankany amin'ny Aguas Calientes, ary mizara ny dimy kilaometatra farany mankany amin'ny rava. Ny lamasinina dia mamela ny Estación San Pedro any Cuzco isan'andro (miankina amin'ny vanim-potoana sy ny fangatahana) mandritra ny adiny telo mankany Aguas Calientes. Ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby dia maneho, ny sasany dia mijanona imbetsaka eny an-dalana. Ny fiaran-dalamby eo an-toerana dia afaka adiny dimy ka hanao ny dia. Ny fanahy feno fadiranovana miaraka amin'ny fotoana bebe kokoa dia afaka manaloka ny Inca Trail, izay lalana malaza indrindra any Amerika Atsimo. Tokony handeha fiaramanidina telo na efatra ny mpandeha an-tongotra mankany amin'ny 33 km (> 20 kilaometatra) noho ny halavoana ambony sy ny lalana mihodina. Ny hafa dia mitsidika an'i Machu Picchu amin'ny fitsangatsanganana izay misy ny fotoana ao Cuzco , Lima, ary ny Lohasaha Masina.
Taratasy iray fanampiny nanampy ireo nankany Machu Picchu. Ny tanàna dia nanjary mpizahatany mpizaha tany malaza indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, saingy tandindonin-doza izao ny tontolo manodidina an'i Machu Picchu.
Ny fandrosoana tsy nomanina dia ilay mpitsoa-ponenana, ary nametraka an'i Machu Picchu ny UNESCO ao amin'ny lisitr'ireo vohikalan-tany manan-danja erantany tamin'ny taona 1998. Antenaina fa hitan'ny manampahefana ao amin'ny governemanta ny fomba hitahirizany tranonkala ara-kolontsaina / arika. Amin'izao fotoana izao, ireo izay mitsidika dia tokony hanaja ny maha-zava-dehibe ny vohikala ary hanandrana sy hamantarany fa tsy manao na inona na inona izy ireo hanohizana ny faritra hafa.
Manoritsoritra azy ve ianao Cusco na Cuzco?
Ny Boleto Turistico: Ticket Ticket Cusco
Fanentanana amin'ny fitsidihana: fitsidihana an'i Cusco
Cuzco, Renivohitry ny Empira Inca
Inti Raymi, Fetin'ny Masoandro
Mialà ao Mississippi ao amin'ny Grand Paradise Waterpark
Ny Jama Masjid ao Delhi: Ny Torolalana Manonona
Ryanair Telo-tsy hita, ny fitsangatsanganana an-dalambe ary ny Misss Neares
Vancouver amin'ny volana novambra ho an'ny mpizaha tany sy ny mpitsidika
5 Bilaogim-behivavy tsara indrindra any Phoenix
Zaridainan'ny Botanical Desert ao Phoenix
Washington, DC Shine New Year Parade 2018
Serendipity 3 Las Vegas ao amin'ny Lapan'i Caesars
Fampisehoana sy fialamboly any Disney California Adventure
Torolalana ho an'ny Summer Phoenix
Ny Nosy Danemarka
Farihy Shasta Houseboat Rental
Mpirotsaka an-tsitrapo hanangana trano mora azo iraisam-pirenena amin'ny habakabaka ho an'ny zanak'olombelona
Halloween any Haunted Alton, Illinois